Iimodyuli ze-Thermopile ze-infrared sensor zemodyuli, abaxhasi - China Thermopile infrared Sensor Module abavelisi
Ulwazi malunga nenkampani Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Thermopile infrared woluvo
Analog IR woluvo
Digital woluvo Digital
Isivamvo AFE IR
Imodyuli yeSensor yeSensra yeSensor
Imodyuli yokulinganisa ubushushu engafakwanga kwindawo enye
I-Array ye-Infrared Ubushushu beModyuli
Inkqubo yoNxibelelwano yoomntu
NDIR woluvo lwegesi
Woluvo Gas CO2
CH4 woluvo lwegesi
Umthombo wokuKhanya kwe-IR
Imilinganiselo yeqondo lobushushu elingadibaniyo
Ukubeka iliso kwezokhuseleko
Ubushushu obungafakwanga ubushushu ...
I-MSA Ubushushu obungenakunxibelelana ...
I-MSC yeNqaku elinye leNqaku leT infrared T ...
I-MSE Thermopile ye-Infrared Tem ...
Isiteshi esili-NDIR Isivamvo ...
I-MSE Thermopile ye-infrared Ubushushu beSikena seModyuli yokuBonwa kobuso iskena sobushushu
I-YY-MSE yohlobo lweemodyuli ze-infrared infrared sisilinganiselo somlinganiso wobushushu esekwe kwindawo ye-infrared single-point ultra-thin surface mount sensor ngokuzimeleyo ephuculwe liLanga. Kufanelekile ukulinganisa ubushushu beselfowuni kunye nezinye izixhobo ezikrelekrele.
Imodyuli yokulinganisa ubushushu be-MSC yeNdawo enye esetyenziselwa ukuBonwa kobushushu beKhamera
Uhlobo lweMSC yohlobo lwenqanaba elinye lobushushu kwimilinganiselo yokulinganisa ubushushu sisicelo somlinganiso wobushushu esekwe kwinzwa enye ye-infrared sensor ngokuzimeleyo ephuhliswe yiSunshine Technologies. Kufanelekile ukulinganiswa kobushushu obusondeleyo, obunokubona ubushushu bento, iqondo lobushushu bomzimba njalo njalo. Inempawu zokungadibani, ukuphendula ngokukhawuleza kunye nokuguqulwa kwedatha okufanelekileyo. Indlela yayo yokulinganisa ubushushu iyafana neethemomitha zebunzi.
I-MSA yokuNxibelelana kobushushu bokulinganisa i-Thermopile ye-infrared Sensor Module yeNkqubo yoLawulo lokuFikelela
Uhlobo lwe-MSA lwenqaku elinye lokulinganisa ubushushu kwimodyuli yemilinganiselo yokulinganisa ubushushu ekude ngokusekwe kwisenzisi esine-infrared sensor ngokuzimeleyo esiphuhliswe yiSunshine Technologies. Imodyuli ineempawu zokungadibani, umgama onokuhlengahlengiswa kunye nokuphendula ngokukhawuleza. Imodyuli inonxibelelwano olulula lonxibelelwano, uyilo lwayo olubonakalayo lwendlela ebonakalayo luyenza ukuba ilungele umlinganiso wobushushu obukude. Isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo, ezinje ngolawulo lofikelelo, ukudlula kwesango njalo njalo.
Ubushushu be-infrared Array Thermopile Sensor Module Hlanganisa ukuThathelwa komfanekiso ngeThermal kunye neKhamera YY-32B
Imodyuli yokulinganisa ubushushu be-YY-32B yeyona nxalenye iphambili yesixhobo. Ngu-FPC-15 okanye ngo-2.0-10 umqolo ophindwe kabini kumatshini womatshini wokunxibelelana nokunxibelelana nehlabathi langaphandle, iziphumo ziyahluka kwaye impendulo iphezulu.
Ubushushu be-infrared Ukulinganisa iModyuli yeSensor yeModyuli yokuThelekisa ngeThermal YY-160A
Iadaptha ilungele abanye abathengi abangadingi SPI usetyenziso lwesinxibelelanisi, kwaye uqhagamshele ngokuthe ngqo kwisoftware yangasemva yiV-COM izibuko elibonakalayo.
I-infrared Thermal Imaging Array Sensor Module ye-Noncontact Measurement Measurement YY-32A
Imodyuli yemifanekiso eshushu yeyona nto iphambili kwisuti. Ngu-FPC-15 okanye ngo-2.0-10 umqolo ophindwe kabini kumatshini womatshini wokunxibelelana nokunxibelelana nehlabathi langaphandle, iziphumo ziyahluka kwaye impendulo iphezulu.